Posted by zizawa ⋅ 29/06/2010	⋅ 77 Comments
စဉ်းစားစရာဘဲ။ အင်း အဲသလိုများလိုက်ပြောတာတောင် အပစ်မကင်းသလိုခံစားရပါတယ်။
Posted by kom | 29/06/2010, 22:15 Reply to this comment	http://www.lknt11.com/search/label/%E1%80%98%E1%80%AD%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%B3%E1%80%94%E1%80%AE%20%E1%80%9D%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%85%E1%81%A7%E1%80%9A
Posted by tint oo | 29/06/2010, 22:47 Reply to this comment	စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ သေချာ သုတေသန လုပ်ကြည့်ရရင်ကောင်းမယ်နော်။
Posted by လင်းလင်း | 29/06/2010, 23:21 Reply to this comment	I believe that we should consider the religion itself and the rules which are created to support the structure around it. The rules created for the Bhikkhunis reflects the cast system of the time. The main purpose of the rules are to buildasystem that can makeareligion functions live longer. The rules set by the future Buddha might be considerably different from the existing ones.
Posted by Nyein Khant | 30/06/2010, 00:24 Reply to this comment	Women want to have equal opportunities, but most of the time, they can’t produce the same outcome forapiece of work that is done by men. Discremination will still exists.
Posted by Gentleman | 30/06/2010, 01:29 Reply to this comment	http://www.burmeseclassic.com/dammaQA.php?status=go&pno=2
Posted by hpoe thar | 30/06/2010, 01:34 Reply to this comment	ဘိက္ခူနီနဲ့ ပတ်သက်ပြီးချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေကတော့ ကျွန်မ အခုမှပဲ သိရလို့ ဘာကြောင့်ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ မတတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ မိန်းမဘုရားမဖြစ်နိုင်ဆိုတာကိုတော့ ဘုရားက ခွဲခြားတာမဟုတ်ဘူး တကယ်ဟုတ်လို့ ဟောခဲ့တယ်လို့ လက်ခံပါတယ်။ မိန်းမတွေဟာ ယောက်ျားတွေထက် သနားကြင်နာစိတ်၊ စိုးရိမ်ပူပန်တတ်မှု၊ သံယောဇဉ် အမျှင် မပြတ်မှု ပိုများပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ တရားရရ ဒီအချက်တွေကြောင့် နှောက်ဆံတင်းမှုဆိုတာ ယောက်ျားတွေထက် ပိုများမှာ သေချာတယ် ဒါကြောင့် မိန်းမဘ၀နဲ့ ဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ကျွန်မတော့ လက်ခံတယ်။ ကျွန်မသားလေးငယ်ငယ်က သွားတွေပိုးစားပြီး Infection ၀င်လို့ ဆေးရုံမှာ သွားပြီး နှုတ်တုန်းက ကလေးက နှစ်နှစ်ခွဲဆိုတော့ သိပ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ငိုပြီးရုန်းနေလို့ ထုံဆေးနဲ့ မရဘဲ မေ့ဆေးပေးပြီးနှုတ်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီတုန်းက သားကို မေ့ဆေးပေးပြီး Operating theatre ထဲဝင်နေချိန် မိဘနှစ်ပါးက အပြင်မှာ ထိုင်စောင့်နေရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်မက ကလေးအတွက် စိုးရိမ်လွန်းလို့ သားလေးသတိရလာပြီး တော်တော်ကြောက်နေမလား၊ မေ့ဆေးပေးနေတဲ့အချိန်မှာ သူ့သွားကို ဆရာဝန်တွေက နှုတ်တော့မယ်ဆိုတာကို သိနေတော့ နာမှာကို စိုးရိမ်ပြီး တော်တော် ကြောက်နေမှာပဲ။ မေ့ဆေးပေးထားချိန်မှာ အိပ်မက်ထဲမှာများ အိပ်မက်ဆိုးတွေ မက်ပြီး ကြောက်နေမလားဆိုပြီး တွေးပူလွန်းလို့ အဲဒီလို မဖြစ်နေပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပြီး ဘုရားစာတွေ အဆက်မပြတ် ရွတ်နေချိန်မှာ ကျွန်မအမျိုးသားကတော့ TV တောင် ကြည့်မပျက်၊ ထိုင်စောင့်တဲ့ ဧည့်သည်တွေအတွက် ခထားပေးတဲ့ သတင်းစာတွေ မဂ္ဂဇင်းတွေတောင် အဖတ်မပျက်တာကို ကြည့်ပြီး ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမဟာ စိုးရိမ်ပူပန်တတ်မှု၊ စိတ်ကိုကြည်လင်အောင် နေတတ်မှု ကွာတာကို သတိထားမိပါတယ်။
Posted by Nge Naing | 30/06/2010, 02:10 Reply to this comment	နောက်ဆုံးပိုဒ်မပါရင် မဆိုးပါဘူး။ ရှေ့က ပြထားတဲ့အချက်တွေက ယောကျာ်းမိန်းမ ခွဲခြားတယ်လို့ ဆိုပြီးတော့ ဘယ့်နှယ်ကြောင့် ဘာသာရေး တချို့အချက်တွေက အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးလို့ ပြောရတာလဲခင်ဗျ။ စိန်ခေါ်သင့်ခေါ်ရမယ်လို့လည်း ဆိုပြန်တယ်။ အဲဒါတွေကတော့ နကိုထဲက စိတ်အခန့်မသင့်တဲ့အချက်တွေကို ယူရေးလိုက်တာပဲ မှတ်တယ်။ အပေါ်က ပြထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ ယောကျာ်းမိန်းမ ခွဲခြားတယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေနဲ့ အဲလောက်ထိ သွားလို့ မရသင့်ဘူးထင်တယ်။ ဘယ်လိုမှတ်ပါသလဲ…။
Posted by အလှတရား | 30/06/2010, 05:14 Reply to this comment	ဆရာရေ
Posted by koaung | 30/06/2010, 06:10 Reply to this comment	koaung
မိန်းမနဲ့ ယောက်ျားဟာ ကွာခြားနေမှာဘဲ (ဇီဝပိုင်းဆိုင်ရာ ကွာခြားမှုရှိတာ မှန်တယ်) ဒါပေမယ့် အဲဒိအခြေခံနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံသင့်တယ်ဆိုတာ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး။ facts ကနေ norms ကိုကောက်ချက်ချလို့ မရဘူး။ တဘက်မှာ ယောက်ျားချင်းတူတူ ခန္ဓာကိုယ် မသန်စွမ်းတဲ့ ယောက်ျားနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်တဲ့ ယောက်ျားကို ခွဲခြားမဆက်ဆံသင့်ရင် ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမကိုရော ခွဲခြားဆက်ဆံသင့်ရဲ့ လား။ မတူလို့ ခွဲတော့ခွဲရမှာပါဆိုရင် အသားအရောင်မတူတဲ့အတွက် ခွဲတော့ခွဲရမှာပါလို့ရော ပြောမလား။ နောက်တခုက ဗုဒ္ဓဘာသာကို တကယ်နားလည်တဲ့လူဆိုတဲ့ စကားစုကေ၀၀ါးလွန်းအားကြီးတယ်။ ‘တကယ်နားလည်တယ်’ ဆိုတာ ဘာမျိုးကို ခေါ်တာလဲ။ (အလှတရား)
မငယ်နိုင်ပြောတာကတော့ ပထမဆုံးစာပိုဒ်မှာ ဖြေပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ ဇီဝပိုင်းဆိုင်ရာ ကွာဟမှုရှိပါတယ်။ မိန်းမဘုရားမဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့စကားက factually မှန်လို့ ပြောတာဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကိုကျွန်တော်လည်း ဥာဏ်မမှီပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘုရားဖြစ်ခွင့် မရှိဘူးဆိုတာကတော့ နည်းနည်းပြင်းတယ်ထင်တယ်။ ဥပမာ ယောက်ျားကိုယ်ဝန်မဆောင်နိုင်ဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခွင့်မရှိ ကွာသလိုပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် အသက်ကို ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ မဖန်တီးနိုင်နဲ့ ဖန်တီးခွင့်မရှိကွာသလိုပေါ့။ ကျွန်တော်က ဒုတိယ အပိုင်းတွေကိုပဲ အဓိက ပြောချင်တာပါ။ ဇီဝဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်ကြောင့် မိန်းမမလုပ်နိုင်တာ ယောက်ျားလုပ်နိုင်၊ ယောက်ျားမလုပ်နိုင်တာ မိန်းမလုပ်နိုင်တာကို မပြောပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီဇီဝဆိုင်ရာ ကန့်သတ်မှုတွေကို ကျော်လွှားနိုင်တဲ့အခါမှာ ပြောခဲ့တဲ့ normative မေးခွန်းတွေ၊ ယောက်ျားကိုယ်ဝန်မဆောင်သင့်၊ အသက်ကို မဖန်တီးသင့်ဆိုတာတွေက အဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကို ပြောချင်တာပါ။ နောက်တခုက ကနေ့ခေတ်မှာ ယောက်ျားမိန်းမ (biological limitation) ဇီဝဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိစေဦးတော့၊ ဒီကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့် ခွဲခြားဆက်ဆံသင့်တယ် ဆိုတာကို တချို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ လက်မခံတော့ပါဘူး။ ခုအချိန်က ၀င်ဘယ်ဒန် တင်းနစ်ရာသီမို့ ဒါကိုထည့်ပြောဖို့ဖြစ်လာတာ။ မိန်းမနဲ့ ယောက်ျား ဂရင်းစလင်ပွဲတွေမှာ ယောက်ျားက best of five sets ရိုက်ရပြီး မိန်းမက best of three sets ပဲရိုက်ရတာ။ ယောက်ျားက ပိုအပင်ပန်းခံနိုင်လို့ပဲ။ အဲဒိအတွက်ကြောင့်ပဲ အရင်ကဆိုရင် ဂရင်းစလင် ဆုကြေးမှာ ယောက်ျားက မိန်းမထက်ပိုရတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ၀င်ဘယ်ဒန်ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ ဂရင်းစလင်တွေမှာ ဆုကြေးကိုတူတူပေးတယ်။ နောက်ဆုံး UK က Lawn Tennis Association ကမနှစ်ကစလို့လားမသိ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမကို ဆုကြေးတန်းတူ စပေးတော့တယ်။ တခြားဂရင်းစလင်တွေဆိုရင် အစောကြီးကတည်းက ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမကို ဆုကြေး တူတူပေးတယ်။
Posted by zizawa | 30/06/2010, 08:39 Reply to this comment	ဗုဒ္ဓစာပေရယ်လို့ ကျန်ခဲ့တဲ့အထဲက ဘလောက်က သူဟောတာအစစ်အမှန်ပါပီး ဘလောက်က ကုလားနဲ့သီဟိုဠ်ဘုန်းကြီးတွေထပ်ဖြည့်ထားတာဆိုတာ မသိနိုင်တော့ပါဘူး။ ကာလာမသုတ်မှာ လာသလိုပဲ ဝိဘဇ္ဇဝါဒနဲ့ ခွဲခြမ်းလက်ခံရမှာပါ။ ခေတ်အခြေအနေမတူတော့ရင် ပြောင်းသင့်တာဟာ ပြောင်းရတာပါပဲ။ ဒီခေတ်ဘုန်းကြီးတွေ ငွေမကိုင်လို့မရပါဘူး။ ဘယ်သာသနာပိုင် ဘယ်ဆတော်ဟာ ကားဘနှစင်း၊ ဘဏ်ထဲမှာ ဘနှသိန်းဆိုတာ ဆန်းတေ… See moreာ့တဲ့ခေတ်မှ ဟုတ်ဘဲ။ မျက်စိကို ဘယ်နှတောင်ဘဲခွာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဘုန်းကြီးတွေ မော်တော်ကားတိုက်ပီး ပျံကုန်ပီဆိုတာလေးပဲ သတိရပါတယ်။ ဆရာတော်ဦးသေဋ္ဌိလတောင် ဘိလပ်မှာ ဘောင်းဘီသင်္ကန်းဝတ်ခဲ့ရသေးတာပဲ။ ဒီတော့ မိန်းမတွေကို ခွဲထားတာဟာ ကုလားထုံးစံ ခွဲချင်လို့ခွဲတာကို ဗမာပြည်ရဲ့ ကမ္ဘာကြီးနောက် အနှစ်တရာလောက် နောက်ကျတဲ့လူမှုစံအရ လက်ခံထားတာပဲလို့ပြောရမယ်။ ခေတ်နဲ့ကြည့်ရင် ဘာမှယုတ္တိမရှိဘူး။
Posted by Bo Bo | 30/06/2010, 09:14 Reply to this comment	ဟေး…. ဘိုဘိုကွ။ စစ်ကူရောက်လာပြီ။
Posted by zizawa | 30/06/2010, 09:16 Reply to this comment	ဘိုဘိုလန်းစင် ပြောတာ ဖတ်ပြီး ကျွန်တော့ reply မှာ တခုလောက် ဖြည့်စွက်ချင်တယ်။
Posted by zizawa | 30/06/2010, 09:54း) ဘာသာရေးဆွေးနွေးမှုဆန်းစစ်မှုက ဗမာပြည်မှာ
Posted by Bo Bo | 30/06/2010, 09:55 Reply to this comment	ကျွန်တော်အနေနဲ့ မြင်တာကတော့ ဘာသာတိုင်းနီးပါးမှာ မိန်းမတွေကို တန်းတူမထားမှုတွေရှိတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ အခုလို တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်မှာ အရာရာကို မေးခွန်းပြန်လှန်ထုတ်ကြပေမဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ ပါတ်သတ်ရင် မရဲကြပါဘူး။ တချိန်တုန်းက ခေတ်ကာလအရမှန်လို့ လုပ်ခဲ့တာတွေကို အခုအချိန်မှာ ဘာလို့ မပြင်ကြသေးတာလည် စဉ်းစားမရပါဘူး။ အနည်းဆုံး ပြန်လှန်မေးခွန်းထုတ်တာတို့၊ လက်သင့်မခံတာတို့တောင်မလုပ်ကြ(ဝါ)မလုပ်ရဲကြပါဘူး။ မှန်တာတွေအများကြီးရှိတိုင်း အမှားမပါနိုင်ဘူးလို့ မဆိုလို နိုင်သလိုပေါ့။ နောက် ဗုဒ္ဓပြောခဲ့သမျ အမှန်ကြီးပဲ(ဝါ)အမှားကြီးပဲလို့ အစထဲက တဖတ်သက် ယုံကြည်ထားရင်လည်း တခုချင်းကို တွေးခေါ်ဆန်းစစ်တဲ့အခါ ဘက်လိုက်မှုတွေပါနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူပြောခဲ့တာ ဘယ်သူချမှတ်ခဲ့တာတွေကို ခဏဘေးဖယ်ထားပြီး စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ရင် ပိုပြီး ရှင်းလင်းတဲ့ အဖြေတခုကို ရနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နောက်တခုက သူတို့ခေတ်တုန်းက အသင့်တော်ဆုံးထင်လို့ လုပ်ခဲ့လည်း အခုခေတ်မှာ မမှန်တော့ရင် ပြင်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အခုလို အယူအစ အတွေးအခေါ်တွေ ကွဲပြားတာတာဟာ ဘာသာအတွက် သိပ်ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောသလို၊ ပိုကောင်းပြီး ခေတ်နဲ့ပိုပြီး သင့်လျှော်တဲ့ ဝါဒတခုလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Posted by မျိုးဇေယျာဦး | 30/06/2010, 10:00 Reply to this comment	သဘောတူပါတယ်။
Posted by zizawa | 30/06/2010, 13:36 Reply to this comment	ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အတွေးအခေါ်ပိုင်းအရ အဆင့်အတန်းမြင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးမှ အများကြီးလို့ ထင်တယ်။ (ဥပမာ ၀ိပ(သကြီး)နာကျင့်စဉ်နဲ့ Hegel ရဲ့ Dialetic ကို ဆက်စပ်လို့ရနိုင်သလား။ အနောက်မှာ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ analytical philosophy ကိုသုံးပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို reinterpret ပြန်လုပ်မလား၊ လုပ်ချင်စရာတွေ အများကြီးပဲ။ ဒါပေမယ့် တော်ရုံတန်ရုံလူက ဒီအကြောင်းအရာတွေကို ဦးနှောက်ခါးတောင်းကျိုက် (တွေ့လား လာပြန်ပြီး ဘယ်လောက် sexist ဖြစ်တဲ့ စကားလုံးလဲ၊ မိန်းမတွေ ဦးနှောက် ခါးတောင်ကျိုက်လို့ မရဘူးလို့ ပြောချင်တာလား။ မိန်းမတွေ မစဉ်းစားနိုင်ဘူး ပြောချင်တာလား)ဖို့ ၀န်လေးတယ်။ ရတနာမွန်တို့၊ မြတ်မွန်မင်္ဂလာတို့မှာပါကြည့်ရင် ဘာဂါထာရွတ်လိုက်လို့ သေဘေးက ဘယ်လိုလွတ်သွားတာ၊ ဘယ်လိုကြီးပွားသွားတာ ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သွေးတိုး ဇာတ်လမ်းတွေက များနေတယ်။ ဆရာ မင်းယုဝေတို့ ဒိထက်မက လုပ်နိုင်တယ်လို့ ထင်တယ်။ ဘာ့ကြောင့် မလုပ်သလဲဆိုတာတော့ ကာယံကံရှင်တွေပဲ သိမှာဘဲ။ နက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်းကိုတော့ စကားထဲတောင် ထည့်ပြောဖို့ မကောင်းဘူး။
Posted by watote | 30/06/2010, 10:19 Reply to this comment	phoe thar, thanks very much. i’ve never seen this site before..
Posted by watote | 30/06/2010, 10:45 Reply to this comment	It is an interesting issue. I have once discussed with many men and women. But it turned out that many women are quite shy to talk about it comparing to men. So while most men agreed on discriminative natures of society, some women still accept that some form of discrimination is still needed.
Posted by Winsg | 30/06/2010, 10:57 Reply to this comment	ကိုယ်ထင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ အားလုံးကို အားရပါးရ ပြောကြေးလားခင်ဗျာ။ ဒါမှမဟုတ် သီအိုရီတစ်ခုကို တင်ပေးပြီး အဖျားရော အရင်းရော လောကီရော လောကုတ်ရော နက်နက်နဲနဲ သုံးသပ်ကြေးလား။ ဘယ်သူမှတော့ သိပ်အားလှတာ မဟုတ်ပါဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် ဥပမာအားဖြင့် ဘိက္ခုနီဝိနည်းကို အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူးဆိုတဲ့ statement ကိုတင် အဲဒါကိုထောက်ခံမဲ့ facts တွေ တင်ပြကြည့်ပြီး ပညာရှင်တွေကို ဖိတ်ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါ့လား။ ဒါမှမဟုတ် ဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရဆီ ပို့ကြည့်ပါ့လား။ လူတိုင်းဟာ အားလုံးကိုတော့ မသိနိုင်ဘူး မှတ်ပါတယ်။ ထောက်ပြချင်တာက အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနဲ့ လူကြီးမင်းဆောင်းပါးဟာ ကောက်ချက်ဆွဲလို့ မဖြစ်သေးတဲ့ ငြင်းခုန်စရာ ဆောင်းပါးသာ ဖြစ်ပါသေးတယ်။ အဲဒီငြင်းခုန်စရာဆောင်းပါးကို ငြင်းခုန်စရာကောင်းတဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဘာသာရေးအယူအဆတွေနဲ့ နောက်တစ်ဆင့်ရှင်းလင်းထားတော့ ငြင်းခုန်စရာတွေပဲ ထပ်ထွက်လာပြီး အားလုံးရှုပ်ကုန်မယ် မဟုတ်ဘူးလား။
Posted by အလှတရား | 30/06/2010, 11:18 Reply to this comment	သီအိုရီဆိုတာထက် အဆို proposition လို့ပြောရင် ပိုကောင်းမယ်။ လူကြီးမင်းနဲ့ သူ့နောက်ဆက်တွဲစာမှာ တင်ပြခဲ့တဲ့ အဆိုတွေကို ချရေးကြည့်မယ်။
ဦးဥာဏိသရမကလို့ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ interpretation နဲ့သူရှိမှာဘဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီ interpretation ဟာ ဆီလျော်မှုရှိမရှိဆိုတာကို ဘယ်သူမဆို စိန်ခေါ်နိုင်တယ်။ ဆီလျော်မှုမရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်ယူဆရင်လည်း ဦးဥာဏိသရမကလို့ ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိန်ခေါ်မှာဘဲ။ ပြောခဲ့တဲ့ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်မြင်တဲ့ထဲမှာ ဘိက္ခုနီစည်းမျဉ်း ရှစ်ခုက အချက်တချို့ လည်းပါတယ်။ ဘိုဘိုလန်းစင် ကွန်မင့်မှာ ထပ်ဖြည့်တဲ့ထဲမှာ ဘုန်းကြီး ပိုက်ဆံ မကိုင်ရတာတို့၊ နောက် burmeseclassic website မှာ ဘုန်းကြီးက ဒါယိကာတွေကို ရေကန်တူးခိုင်းဖို့ မသင့်တာတို့ဟာ တချိန်မှာ (ရေတွင်းရေကန်ရှားတဲ့အချိန်မှာ) အဓိပ္ပါယ် မရှိတော့တာကို တွေ့လာရတဲ့အချက်တွေ ပါတယ်။ အဆို (၄)
Posted by zizawa | 30/06/2010, 12:29 Reply to this comment	အပေါ်က ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ အဆို(၁)က မပြည့်စုံဘူး။ ဘာသာစကားကို ဓလေ့ထုံးစံထဲ ထည့်ပြောလိုက်တာ။ ဒီတော့ နည်းနည်းထပ်ဖြည့်စွက်ချင်တယ်။ ဥပမာ ဘုန်းကြီး တရားဟောတဲ့အခါ မိန်းမတွေကို နောက်ပို့ထားတာ။ ‘ကဲကဲ ယောက်ျားတွေ ရှေ့ သွား’ ဆိုတဲ့ စကားက မကြားချင်မှအဆုံးပဲ။ ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားကို ဘယ်မိန်းမကမှ လက်နဲ့ ထိခွင့်မရဘူး။ ကိုယ်ကျင့်သီလ ဖြူစင်တဲ မိန်းမက အထက်ပစ္စယံပေါ်တက်လို့မရပေမယ့် စိတ်ဓတ်သိမ်ဖျင်းအောက်တန်းကျ အနုတ်စုတ်ဂုတ်စုတ်၊ အုတ်ကြားမြက်ပေါက်၊ အမြီးကျက် အမြီးစား ခေါင်းကျက်ခေါင်းစား၊ ဘုန်းကြီးကိုသေလောက်အောင် ရိုက်တဲ့ အတောင်နှစ်ဆယ် ၀တ်တွေတော့ အထက်ပစ္စယံတင် မကဘူး၊ ဟိုးထိပ် ငှက်မြတ်နားထိ တက်ခွင့်ရှိတယ်။ ထီးတော်လဲခွင့်ရှိတယ်။ Why?
Posted by zizawa | 30/06/2010, 13:01 Reply to this comment	စိတ်ပါဝင်စားစွာ အားတက်သရော ဖတ်နေပါကြောင်း။
Posted by Rita | 30/06/2010, 13:03 Reply to this comment	၀မ်းသာပါ၏။ ကျုပ်က အမိ စာမရေးတော့ဘဲ မော်ဒယ်ဂဲများလုပ်ဖို့ ကြံနေပြီလားလို့…🙂
Posted by zizawa | 30/06/2010, 13:17 Reply to this comment	too old enough to beamodel girl.🙂
Posted by Rita | 30/06/2010, 15:01 ((ဗုဒ္ဓစာပေရယ်လို့ ကျန်ခဲ့တဲ့အထဲက ဘလောက်က သူဟောတာအစစ်အမှန်ပါပီး ဘလောက်က ကုလားနဲ့သီဟိုဠ်ဘုန်းကြီးတွေထပ်ဖြည့်ထားတာဆိုတာ မသိနိုင်တော့ပါဘူး။))
Posted by Lun Lunn | 30/06/2010, 15:15 Reply to this comment	တစ် –
စကားထဲကဇာတိပြ ဆွေးနွေးဘက်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုေ မ်ာဒယ်ဂဲ လုပ်ဖို့ ကြံနေပြီလားလို့ နောက်လိုက်တာကိုက ကိုယ်တို့ ယောက်ကျားတွေက သူတို့ ကိုအလိုလို တနေရာရာမှာထားနေတယ်ဆိုတာပြနေတယ်။ နှစ် – မိမ္မကိုခွဲခြားနှီမ့်ချတာကတော့ နေရာတကာမှာပါဘဲ – အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါမှာတောင်မိမ္မတွေမဲထည့်ခွင့်ကိုအကြာကြီးပိတ်ဆို့ ထားခဲ့တယ်ဘာသာရေးနဲ့ ကိုမဆိုင်ဘူး ယောက်ကျားတွေကပိတ်ဆို့ ထားတာ –
ဒါ ဗမာပြည်မှာတင်မဟုတ်ကမ္ဘာနဲ့ ချှီပြောင်းသွားတာခေတ်ပြောင်းတိုင်း ဘာသာရေးက လိုက်ပြောင်းရယင် ဘာသာရေးဆိုတာဘာဖြစ်သွားမလဲ – THERMOSTAT တမျိုးလား – အခန်းထဲမှာအေးလာယင်ပူအောင်၊ ပူလာယင်အေးသွားအောင်ထိမ်းညှိပေးတဲ့ခလုပ်လား လူ့ အလိုကိုဘာသာရေးကမလိုက်ဘူး -ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူ့ အလိုဆိုတာ
လူ့ အလို အတိုင်းဘာသာရေးကလိုက်ပြောင်းနေရယင် ဗမာဘုန်းကြီးတွေလဲ ဂျပန်ဘုန်းကြီးတွေလို အိမ်ထောင်ပြုသွားလိမ့်မယ်။ “ခေတ်” ဆိုတာပြောင်းလဲနေတဲ့လူ့ အလိုဆန္ဒတစ်ခုခုဟာသူတစ်ဦးထည်းရဲ့ဆန္ဒ မဟုတ်တော့ဘဲလူအများရဲ့ ‘ဘုံ’ ဆန္ဒဖြစ်လာတာတဲ့အချိန်တစ်ခုခုဟာခေတ်ပဲ
မြင်ယောင်မိသေးတယ်။ တိုင်းပြည်ကဆင်းရဲတဲ့မြန်မာပြည်မှာတိုက်မြင့်မြင့်ကြီးပေါ်နေမှချမ်းသာတယ် ခေတ်မှီတယ်ထင်မယ် – ကျနော်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာ ဆင်းရဲကြလို့သာ တက်ရဆင်းရခက်တဲ့အမြင့်ကြီးတွေမှာနေရတယ် – အမြင်ချင်းပြောင်းပြန်ဘဲ – ဘယ်သူကဘယ်ခေတ်ကိုမှီနေတာလဲ စဉ်းစားပါ။
ဒီတာဝန်ဟာကြီးလေးလွန်းလှသလိုစည်းကမ်းလဲတင်းလဲလွန်းလှပါတယ်။ ယောက်ကျားတွေတောင်ယောက်ကျားတိုင်းမလုပ်ချင်ကြဘူးလေ။ အဲဒီတာဝန်ကို မှအမျိုးသမီးတွေကလဲဝင်ယူချင်တယ်ဆိုတော့ သူတို့ ကိုငဲ့ပြီး ဘုရားချက်ချင်း ခွင့်မပြုခဲ့တာပါ။ အမျိုးသမီးတွေကိုရဟန်းဘ၀မှာ ယောက်ကျားရဟန်းတွေထက် ပိုတင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်းထုတ်ခဲ့ရတာကတော့ အမျိုးသမီးတွေကို ဖိနှိပ်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘဲ ယောက်ကျားတွေ (ရဟန်းတွေပါ ပါတယ်) ရဲ့အန္တရယ်ကိုမြင်လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် – ပိုကျယ်ဝန်းတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကတော့ သာသနာတော်တရပ်လုံးရဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားအလို့ ငှာသာဖြစ်ပါတယ်။
သို့ သော်လောကမှာမိမ္မအဖြစ်နဲ့ တိုက်ရိုက်မဖြစ်နိုင် မလုပ်နိုင်တဲ့တခြား အရာတွေလဲရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ (၅) ဒီအချက်ကတော့ မူလအငြင်းအခုံမှာမပါပေမဲ့ ကျနော်အထူးတင်ပြလိုတဲ့ အချက်ပါ – အဲဒါကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အထူးသဖြင့်စည်းကမ်းတင်းကျပ်တဲ့ ထေရ၀ါဒ – အပေါ်မှာခေတ်မမှီဘူးဆိုတဲ့အချက်နဲ့စွန့် ခွာလိုသူများ အပေါ်ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်များရဲ့ပကတိသဘောထား (attitude) ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ထေရ၀ါဒ၀င်တွေဟာသူတို့ ရဲ့ဘာသာကိုရတနာ(သုံးပါး) တွေလို့သဘောထားပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ရတာဟာ အဲဒီရတနာတွေကိုပိုင်ခွင့်ရ တာပါဘဲအဲဒီရတနာတွေကိုပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်ကသူ့ အလိုလို စွန့် လွှတ်သွား ယင် သူ့ ကိုသနားတာကလွဲ လို့ တခြားဘာခံစားချက်မှအပြင်း အထန်မဖြစ်ပါဘူး ။ အမြင်မှန်ရလို့ ပြန်လာယင်လဲ ဧဧဆေးဆေးပဲ
Posted by myit shwe | 10/11/2011, 18:16 Reply to this comment	ကျနော်စိတ်ဝင်စားလို့ နည်းနည်းဝင်ပြောမယ်နော.. မနက်က ဗမာလို မရလို့ ဘိုလိုရိုက်လိုက်ရတယ်။
Lady First လိုဟာမျိုးကျတော့ မိန်းကလေးတွေက ကြိုက်ပါတယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ကြိုက်ရင် လိုက်ချဉ်းကပ် ကြိုးစားသင့်တယ် ဆိုတာမျိုးကို လက်မခံကြပါ။ အဲဒီငနဲက မကြိုက်ရင် နှောက်ယှက်မှုနဲ့ ရဲတိုင် တရားစွဲဆိုခွင့် (မိန်းကလေးများ လုပ်ခွင့်ရှိသလို) ရှိသင့်တယ် ဆိုလိုက်တော့ “ရှင်နော်လွန်တယ်” ဆိုတာမျိုးလုပ်ချင်တယ်။ မယားစားရိတ် တောင်းခွင့်ရှိသလို လင်စားရိတ်လည်း ရှိသင့်တယ်ဆိုတော့ ခေါင်းခါကုန်ကြပါရောလား။ ဒါတွေအားလုံးဟာ တန်းတူရေးမဟုတ်ပေဘူးလား။ နောက်ဆုံး Lady first ပဲကောင်းပါတယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ဂျူးရေးဖူးတယ်။ သူ့ လမ်းလျောက်တာ လိုက်စနောက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ အကြောင်းပါ။ ဂျူးကတော့ အမျိုးသမီးရေးကို ရှေ့ဆောင်ရေးသူဖြစ်ပေမယ့် သူကိုယ်တိုင်မှာတောင် ခွဲခြားတဲ့ စိတ်ရှိနေကြောင်း ဝန်ခံထားပါတယ်။ နောက် England က ပညာရေးလောကမှာ လေ့လာချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ BBC မှာထင်တယ် ဖတ်လိုက်ရတာ။ ပညာရေးမှာ လိင်ခွဲခြားမှုအကြောင်းပါ။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပဲ စစ်တမ်းလုပ်တာပါ။ အဲဒီမှာလည်း အမျိုးသမီးတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပညာရေးအတားအဆီးတွေမှာ အဓိက အတားအဆီးက ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ပါတဲ့။ Institutional အတားအဆီးတွေရှိပေမယ့် သိပ် မကြီးမားဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
Posted by WinSg | 30/06/2010, 16:15 Reply to this comment	တခုတော့ ကြိုပြောထားချင်ပါတယ်။ ဒီလို အရေးကိစ္စတွေမှာ ကိုယ့်ဘာသာ ဘာမှန်း (ဘယ်ဘက်ကမှန်း) သေချာ မသိဘူးဆိုတာ။🙂
ဒါပေမဲ့ mining လို ဘာသာရပ်မျိုးကို မရ ရအောင် တက်သွားတဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် အစိတ်ကျော်က မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အကြောင်းကို ကြားဖူးတော့ သိပ်အားရမိတယ်။ ဘုရားပေါ် မတက်ရလို့၊ သိမ်ထဲမဝင်ရလို့၊ ဘုရားဖြစ်ခွင့်မရလို့ (ဖြစ်ခွင့်မရဆိုတာတောင် အမျိုးသမီးဘဝနဲ့သာ မရတာနော်။ ဂေါတမ အလောင်းလျာက ဘုရားဖြစ်ဖို့ စတင် စိတ်ညွတ်လိုက်တဲ့ ဘဝဟာ အမျိုးသမီး ဘဝလို့ ဆိုတယ်။) တော့ သိပ် မလွမ်းလောက်ဘူး။ ဒါအမှန်ပြောတာ။
Posted by RITA | 01/07/2010, 07:36 Reply to this comment	ဟုတ်ကဲ့ သဘောကျပါကြောင်း။ ကျနော်တို့ပြောဆိုမိ သလောက် မိန်းကလေးတွေက ဒီအတိုင်းအတာ လောက်ပါပဲ။ Mining တင်မကပါဘူး။ USA မှာ မိန်းကလေးတွေ စစ်တိုက်လို့ပါ ရကြောင်းပါ။ GI Jane လေ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ စစ်မှုမထမ်းမနေရ နိုင်ငံမျိုးတွေမှာ မိန်းကလေးတွေကို ထည့်သင့်မထည့်သင့် ဆွေးနွေးနေကြတာလည်း ရှိကြောင်းကြားမိပါတယ်။
Posted by WinSg | 01/07/2010, 17:09 ဟုတ် ပြီ အဆို(၁)က စသွားရအောင်။ အဲဒါကို ပိုစ့်တစ်ခု တင်ပေးပါလား။ ၀ိုင်းစဉ်းစားကြတာပေါ့။ ဘာသာစကားကို ဓလေ့ထုံးစံထဲထည့်ပြောမိတယ်လို့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောလိုက်တာကို ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ။ ဒါဆိုရင် အဲဒီစကားလုံးတွေကို ထည့်ဆွေးနွေးမလား။ ချန်ထားခဲ့မလား။ မိန်းမက ကျိုက်ထီးရိုးကို ထိခွင့်ရပြီး ရှေ့ကသွားခွင့်ရရုံနဲ့ ပြည့်စုံပြီလား။ အခြားဘာအချက်တွေ ထည့်ချင်သေးလဲ။ ထည့်ပြီဆိုပါစို့။
Posted by အလှတရား | 30/06/2010, 16:25 Reply to this comment	အဆို(၁)ကိုပြောလို့ ကျန်တဲ့အဆိုတွေကို ချန်ထားခဲ့မယ်လို့ မရှိပါဘူး။ တစ်ခုချင်းသွားရင် ပိုရှင်းမလားလို့ အကြံပြုတာပါ။ သဘောအတိုင်းဆုံးဖြတ်ပါ။ ပြီးတော့လဲ စာရေးသူအနေနဲ့ တချို့အချက်အလက်တွေကို ပိုပြီးတာဝန်ယူဖို့လိုမယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျိုက်ထီးရိုးမတက်ရ အချက်ကို ကိုင်စွဲမယ်ဆိုရင် “ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားမှာလဲ တံတားလေးကနေ စေတီတော်ဘက်သို့ မသွားရတာကတော့ စေတီတော်ရဲ့ဝန်းကျင်က ကျဉ်းတယ်။ အကာအရံလဲမရှိတဲ့အတွက် အားငယ်ပြီးကြောက်တတ်တဲ့ အမျိုးသမီးများနဲ့မသင့်လျော်ဘူး၊ မူးမော်ပြီး လိမ့်ကျမှစိုးတဲ့အတွက် အန္တရာယ်များလှတဲ့ အတွက်ကြောင့် တားမြစ်ထားတာဖြစ်တယ်၊ အမျိုးသမီးများစေတီတော်ရင်ပြင်နားအထိ လာရောက်ရှိခိုးတာကို နတ်များက မကြိုက်လို့ တားမြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ၁၂၇၇ ခုနှစ်က ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်မှာ အုပ်ချူပ်တဲ့ ဆရာတော်ဦးအာဒိစ္စက ပြောပါတယ်။” ဆိုတဲ့
အချက်တစ်ချက်ကို ကြားဖူးထားဖို့ သင့်မယ်။ light of dhamma ဘလော့ဂ်ရှင် မြိတ်ကဆရာတော် ဦးကောဝိဒ မှတ်သားထားတာပါ။ နောက်တစ်ချက် အနေနဲ့ အသုံးအနှုန်းတစ်ချို့ကို ရှေးရိုးဆန်ပေးရင် ပိုကောင်းမယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ယေရှုခရစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အလ္လာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ငနဲသားတို့ ဆရာသမားတို့လို့ ခေါ်တာမျိုးကို သဘောမကျပါဘူး။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကို ဒီလိုခေါ်ရင် မသင့်ဘူးလို့ မှတ်တာပဲ။ ဒါကြောင့် ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ လေးစားသမှုအရ ဆိုပါစို့။ အဲဒါကြောင့် စာရေးသူရေးထားတဲ့ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ နာမ်စားအဖြစ် “ကိုယ့်ဆရာက” လို့ သုံးထားတာကို တော့ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ကန့်ကွက်ရပါတယ်။
Posted by အလှတရား | 30/06/2010, 16:44 Reply to this comment	ဟုတ်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ လေးစားသမှုတော့ရှိသင့်ပါတယ်။ “ကိုယ့်ဆရာ” ဆိုတဲ့ အသုံးကို လုံးဝ ကန့်ကွက်ပါတယ်။ စာဖတ်နေတဲ့ သူတွေ အများကြီးပါ။ “နှုတ်တစ်ရာ စာတစ်လုံး”တဲ့ စကားလုံး အသုံးကြောင့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ပေါ်လွင်စေပါတယ်။
Posted by MayThandar | 02/07/2010, 16:51 Reply to this comment	ဦးဥာဏိဿရကို ပို့ကြည့်ပါဆိုတဲ့အချက်ကို ဦးဥာဏိဿရမက ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်လို့ဆိုတော့ အံ့သြတယ်။ ဘာသာတရားအကြောင်း ပြောရင် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ interpretation ကို လည်း အလေးအနက်ထား သုံးသပ်ရမှာပဲလေ။ ဆွေမျိုးတွေ ဟိုမုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရောဂါဖြစ်ရင် ကိုယ်ဘယ်လောက်ဖတ်ထားတဲ့ ဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ် endocrinologist ရဲ့ opinion ကို အလေးအနက်ထား သုံးသပ်ရမှာပဲ။ ဒီလောက်ကို ရှင်းတယ် မှတ်ပါတယ်။
Posted by အလှတရား | 30/06/2010, 16:53 Reply to this comment	religious studies ဆိုတာ ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာ အခိုင်အမာရှိတဲ့ ဘာသာရပ်တွေဖြစ်တယ်။ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးတွေလဲ သွားသင်နေကြတာပဲ။ ပီးတော့ ဗမာပြည် မန္တလေး ပခုက္ကူမှာ သီတဂူတပါးထဲ ဆရာရယ်လို့ရှိတာမှုတ်ဘူး။ ပီးတော့ မြန်မာပြည်က ဘာသာရေးကျမ်းဂန်သင်နည်းဟာ အာဂုံဆောင်အနက်ဖွင့်တာလောက်ပဲ သန်တာမို့ ခေတ်မီတယ်ရယ်လို့ အရှင်အာဒိစ္စ တောင်မြို့ဆရာတော်တို့ခေတ်ကထဲက မသတ်မှတ်ဘူး။ ဘာသာရေးစာပေမှာ လူဝတ်ကြောင်တွေ လူထွက်ကြီးတွေ စဝ်ထွန်းမှတ်ဝင်းလို နိင်ငံခြားပြန်ပညာရှင်တွေကဏ္ဍဟာလဲ ဘုန်းကြီးများနဲတူ အရေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးက ဘာသာရေးမှာ ပြောပိုင်ခွင့်အရှိဆုံးဆိုတာ အလယ်ခေတ် ဗာတီကန်နဲ့ အခုခေတ် မော်လဝီတွေ အမြင်မျိုးပဲ။
Posted by Bo Bo | 30/06/2010, 17:08 Reply to this comment	ဒါလည်း ရှင်းတယ်လေ။ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်တစ်ပါးလို့ ယူလိုက်ပေါ့။ ဘိုဘိုက ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတည်း ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ ပြောပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်ကို အလေးထားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို မကြေပျက်စေပါဘူး။ ဖြည့်စွက်ပေးလိုက်တာပဲ ဖြစ်သွားတယ်။ စစ်တိုက်ချင်ရင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သုံးသပ်ချက်ကို အလေးထားရတာပဲ။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်မှာမှ အရှေ့အလယ်ပိုင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်လား၊ အာရှဘက်ကို ကျွမ်းကျင်တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်လား၊ လေတပ်ဗိုလ်ချုပ်လား၊ ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်လား၊ စတာတွေပေါ်မူတည်ပြီး သူတို့အမြင်တွေအပေါ် ဂရုပြုတာချင်း ကွာရတာပဲ။ မိမိအနေနဲ့ မေးမြန်းစရာရှိလာခဲ့ရင် စာတတ်တဲ့ပညာရှင်ချင်းတူရင် အကျင့်သီလချင်းရော ၀ိနိစ္ဆာဥာဏ်ချင်းရော စိတ်ဝင်စားတတ်တာတွေရော ဘယ်ပညာရှင်က သင့်လျော်မလဲ စဉ်းစားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးဥာဏိဿရဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ အသုံးကို အံ့သြဖို့ လိုတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ဗမာဘုန်းကြီးတွေ စာသင်တာ ခေတ်မမီဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ သတိထားပြောဖို့ လိုလိမ့်မယ်။ ခုခေတ်ထိလားလို့ ပြန်မေးရမလိုပဲ။ ဘယ်သူတွေပါတုန်းလို့ မေးရမလားပဲ။ ဆင့်ကွဲအငြင်းပွားစရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီတွင် တန်ပါတော့။ အဆိုတစ်ကိုပဲ ပြန်စကြပါ။
Posted by အလှတရား | 30/06/2010, 17:30 Reply to this comment	ဘိုဘိုက အဲဒီဘက်ကို ဆွေးနွေးချင်ရင် နောက်တစ်ဆင့်သွားပါ။ ဂျင်ဒါကိစ္စက ဘယ့်နှယ်ရောက်လာတာပြန်တုန်း။ ကျုပ်တို့ပြောနေတာ ဘိက္ခုနီဝိနည်းနဲ့ ၀ိနိစ္ဆယမှတ်တယ်။ အန်ဂျီအုိုလုပ်နေတဲ့ အကြီးစားကြီးလို့ပြောတာကတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အာဃာတပဲလေ။ မြိုသိပ်ထားပါ။ ထုတ်မပြပါနဲ့။
Posted by အလှတရား | 30/06/2010, 17:48 Reply to this comment	ဘဝင်မကျဆုံး အချက်တခု ရှိပါတယ်။
Posted by RITA | 01/07/2010, 01:09 Reply to this comment	စာရေးသူပေးချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို ကျနော်မျက်ခြေမပြတ်ပါ။ ဥာည့်နက်လို့ ပြန်ပါပြီ။ နောက်နေ့ဒီအချိန်ကျမှ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပါမယ်။
Posted by အလှတရား | 30/06/2010, 17:50 Reply to this comment	ဒီခေါင်းစဉ်က စကထဲက ဂျင်ဒါနဲ့ ဘာသာရေးအခွင့်အရေးကိစ္စပဲ။ ဘိက္ခူနီကိုဘာလို့ ဒီလောက်ချုပ်ချယ်ခဲ့သလဲဆိုတာ ပြောနေကြတာ။
Posted by Bo Bo | 30/06/2010, 18:17 Reply to this comment	နံပါတ် ၃ အချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။
Posted by WinSg | 30/06/2010, 18:32 Reply to this comment	Please bear with me forafew hours before I put another post.
Posted by watote | 30/06/2010, 18:48 Reply to this comment	ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားမှာလဲ စေတီတော်ဘက်သို့ မသွားရတာကတော့ စေတီတော်ရဲ့ဝန်းကျင်က ကျဉ်းတယ်။ အကာအရံလဲမရှိတဲ့အတွက် အားငယ်ပြီးကြောက်တတ်တဲ့ အမျိုးသမီးများနဲ့မသင့်လျော်ဘူး၊ မူးမော်ပြီး လိမ့်ကျမှစိုးတဲ့အတွက် လို့ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ဟာ ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ ဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်ပါ။ မူးမော်တက်တဲ့ အထဲမှာ ယောက်ကျားသားတွေလည်း အများကြီးရှိတက်သလို ယောက်ကျားတွေထက် ပိုပြီး သတ္တိကောင်းတဲ့ မိန်းမသားများ ဒုနဲ့ဒေးရှိပါတယ်။ ရွှေတီဂုံဘုရားမှာ မိန်းမ မသွားရတဲ့ နေရာတို့၊ သိမ်ထဲကို မိန်းမ မဝင်ရတာတို့ တားမြစ်ထားတာနဲ့ ပိုပြီးတူပါတယ်။ လူလူချင်း အတူတူ ဒီလိုနေရာလေးတွေ သွားတာတောင် မိန်းမ မို့လို့သွားခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကိုတော့လက်မခံနိုင်တာပါ။ သူတို့အနေနဲ့ ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့ မွေးရာပါ မိန်းမဖြစ်နေတာတခုထဲနဲ့အနှိမ်ခံနေရတာကို ထောက်ပြတာပါ။
Posted by မျိုးဇေယျာဦး | 30/06/2010, 23:32 Reply to this comment	နေ့တိုင်းနီးပါး ရောက်ပါတယ်။ အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်တဲ့ စာတွေ တင်တဲ့အခါမှ ဘာမှ မပြောဘဲ ပျောက်နေတယ်လို့ ထင်မှာစိုးလို့ ၀င်ရေးလိုက်တယ်။
5.	ဘုန်းကြီး တရားဟောရင် ဒကာကြီးတွေက ရှေ့ကနေပြီး၊ ဘိက္ခူနီမ တရားဟောရင် ဒကာမကြီးတွေက ရှေ့ကနေ နာမယ့် နေ့ကို မြင်ချင်ပါတယ်။ ရွှေတိဂုံ ဘုရား အထက်ပစ္စယံကို ဒကာကြီးတွေနဲ့ ဒကာမကြီးတွေ တစ်လှည့်စီ အချိန်ခွဲပြီး (မနက်ပိုင်း/ညနေပိုင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီနေ့/နောက်နေ့) တက်နိုင်မယ့်နေ့ကို မြင်ချင်ပါတယ်။ (အများစုက ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ကို စိတ်ဝင်စားတတ်လို့ အဲဒီ အမှောင့် distraction ကို ဖယ်တာ။) လူမျိုးရေးမှာ discrimination ရော၊ segregation ရောကို ဆန့်ကျင်ပေမယ့် ရဟန်း/ရဟန်းမ သာသနာမှာ discrimination ကိုဆန့်ကျင်ပြီး၊ segregation ကိုတော့ ကိစ္စပေါ်မူတည်ပြီး (case by case) ခွင့်ပြုသင့်ရင် ခွင့်ပြုရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် အဓိကရည်ရွယ်ချက် ပျောက်ကုန်မယ်။ (Otherwise, it’ll defeat the purpose.) ဆိုလိုတာက ဘိက္ခူ၊ ဘိက္ခူနီမ မခွဲခြားရေးကြောင့် ဘိက္ခူရော၊ ဘိက္ခူနီမရော တစ်ကျောင်းတည်း သီတင်းသုံးလည်း ကိစ္စမရှိဘူး၊ ကိုယ်သိက္ခာ ကိုယ်လုံရင် ပြီးတာပဲ လို့ ပြောလာခဲ့ရင်တော့ သဘောမတူပါဘူး။ (အခု မှတ်ချက် ထားခဲ့သူတွေရော၊ ရေးသူတွေ ထဲမှာပါ အဲဒီလို ပြောတဲ့လူ မပါပါဘူး။ ပြောလာခဲ့ရင်လို့ ပြောတာပါ။) 6.	သာသနာတော်ကြီး ၀မ်းဖောဝမ်းယောင် (ရှင် ဇနကာဘိဝံသ မိန့်ခဲ့တဲ့ စကားလို့ ထင်ပါတယ်) ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ဘဲ၊ အခုထက် ပိုပြီးထွန်းကားမယ့် နေ့ကို မြင်ချင်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာပြည် ဗုဒ္ဓသာသနာမှာ ထွန်းကားလာတာတွေ ရှိသလို၊ ဆုတ်ယုတ်သွားတာတွေလည်း ရှိနေတယ်ဆိုတာ အားလုံးလက်ခံလိမ့်မယ် ထင်တယ်။
Posted by ပိုင် (Pi) | 01/07/2010, 03:28 Reply to this comment	(မိန်းမကျင့်၊ မိန်းမကြံ တို့၊ ထမီဝတ်ထားပါလားတို့၊ အလကားကောင် အခြောက်ကြီးတို့ စတဲ့ ခွဲခြားနှိမ့်ချတဲ့ စကားမျိုးကို မြန်မာ အများစု မသုံးတော့မယ့် နေ့ကို မြင်ချင်ပါတယ်)
အင်း ဒီစာကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ထူးဆန်းတာတစ်ခု စိတ်ထဲ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီစကားလုံးတွေ ဆက်သုံးလို့ ရဖို့ ဆက်ရှိနေစေချင်မိတာ။ ဘာလို့ဆို ယောက်ျားလို မကျင့် မကြံ မပြောဆိုနိုင်တဲ့ ငတိတွေကို အဲဒီစကားလုံးနဲ့ နာအောင် ပြောချင်လို့။ အဲဒီစကားလုံးကို အသုံးမကျတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုပြောလိုက်လို့ မိန်းမတွေက သူတို့ကို နှိမ်တယ် ဆိုတဲ့ sense ဝင်မလာဘူး (အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်မှာ မဝင်ဘူး) သူတို့ကို နာအောင် ပြောလိုက်လို့ ရတဲ့ စကားလုံးလို့ပဲ sense ဝင်လာတယ်။
အဲလိုသာ မသုံးကြတော့ရင် အဲလို အသုံးမကျတဲ့ ယောက်ျားတွေကို ထိအောင် ပြောဖို့ စကားလုံးအသစ် ထပ်ရှာရမယ်။ အဲဒီလို ပြောင်မြောက်ပြီး အဲဒီလို စကားနဲ့ တူညီစွာ သူတို့ကို ထိအောင် ပြောလို့ရမယ့် စကားလုံး အသစ်ပေါ့။ နောင်လာ နောင်သား မိန်းမတွေ မိန်းမလို မိန်းမရ ကွယ်ရာ အတင်းပြောပြီး ကိုယ့်စကားကိုယ် တာဝန်မယူရဲတဲ့ အသုံးမကျတဲ့ ယောက်ျားတွေကို ပြောဖို့ စကားလုံးအသစ် ဒီနေ့ကစလို့ ရှာရတော့မယ်။
Posted by RITA | 01/07/2010, 07:58 Reply to this comment	ငတိတွေကို နာစေချင်ရင် တခြား နာမယ့် စာလုံးတွေ သုံးလို့ ရပါတယ်ဗျာ။ ဥပမာ မိန်းမကျင့်၊ မိန်းမကြံလို့ သုံးလေ့ရှိတဲ့ အခြေအနေတွေ အများကြီးထဲက လိမ်ညာကောက်ကျစ်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြေအနေအချို့ဆိုရင် “မိန်းမကျင့်၊ မိန်းမကြံ” လို့ ပြောမယ့်အစား “စိဉ္စမာဏဉာဏ်၊ စိဉ္စမာဏကြံ” လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် မိန်းမ ဈေးကျလှပါတယ်။ ဒါဥပမာပါ။ နောင်ကို ငတိတစ်ကောင်ကောင်ကို နာအောင် ပြောချင်စိတ် ပေါက်လာရင် ကျွန်တော် ဘာပြောမိလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဖာသာ သတိထားပြီး မှတ်ထားပါမယ်။ အစားထိုး စကားလုံးအတွက် စာရင်းပြုစုလို့ ရတာပေါ့။😀
Posted by ပိုင် (Pi) | 02/07/2010, 02:00 ဟုတ်တယ်။ ခုမှ အိုင်ဒီယာရလာတယ်။
Posted by RITA | 02/07/2010, 03:28 ရီတာက ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဆော်ပလော်တီးတတ်တာပဲ။ ထွက်လာမှာပါ။ ထိထိမိမိ ရှိတာလေးတွေ တွေ့လည်းမျှဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်.😀
Posted by zizawa | 02/07/2010, 12:14 ဆရာခင်ဗျား ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်များကို ရိုးရိုးသားသားရေးတာပါ။
Posted by koaung | 01/07/2010, 05:55 Reply to this comment	“ဗုဒ္ဓကအားလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အယူအဆအသစ်ကိုချပြနေတာပါ။
Posted by WinSg | 01/07/2010, 18:02 Reply to this comment	“ဗုဒ္ဓကအားလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အယူအဆအသစ်ကိုချပြနေတာပါ။
ကျွန်တော် နားလည်တာက ဗုဒ္ဓဝါဒ = အနတ္တဝါဒ ။သူ့ထက် အစဉ်အလာကြီးခဲ့တဲ့ အယူအဆတွေ၊ ယုံကြည်မူတွေ၊ကိုးကွယ်မူတွေ = အတ္တဝါဒ “ကျနော် အဲဒါကို လိုက်ဖတ်ခဲ့တုန်းက အတော်တုန်လှုပ်ခဲ့တာ တစ်ခုက ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ကျနော်အစက ယူဆထားသလို အတွေးအခေါ်အသစ် စက်စက် မဟုတ်ဆိုတာကိုပါ။”
Posted by zody | 02/07/2010, 06:07 @zody
Posted by zizawa | 02/07/2010, 09:10 @zizawa
Posted by MayThandar | 02/07/2010, 17:06 Reply to this comment	ကိုယ့်စိတ်ကို ပြချင်လို့ကို ‘ကိုယ့်ဆရာ’ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးလိုက်တာပဲ။ လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကို အတွက်မှားသွားတယ်။ ဒီစကားလုံးအတွက် ထိခိုက်မှု ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် တောင်းပန်ပါတယ်။
Posted by zizawa | 02/07/2010, 21:52 ဟုတ်ကဲ့။ လူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုဆိုတာထက် လူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ထားရှိရမဲ့ ယဉ်ကျေးမှု လေးစားသမှုတွေအတွက် “ကိုယ့်ဆရာက” ဆိုတဲ့ အသုံးကို အတိအလင်း ကန့်ကွက်တာပါ။ ယဉ်ကျေးမှု လေးစားမှုမှ မရှိရင် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း ဘယ်လို ဖြစ်သွားမလဲ စဉ်းစားစရာပါ။ ဟုတ်ကဲ့ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by MayThandar | 03/07/2010, 04:38 ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလို့ ရိုရိုသေသေ ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံးနေတဲ့ ဘုရားကို ကိုယ့်ဆရာ လို့ ခေါ်တာ မသင့်တော်ပေမယ့် ရိုင်းတယ်လို့ ကျွန်တော် မယူဆပါ။ အဲဒိအတွက် သုံးတာပါ။ တချို့ အတွက်တော့ ဒီစကားလုံးဟာ ရိုင်းတယ်ဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။ ရွှေတိဂုံ ဘုရားမှာ ရေသပ္ပယ်ရင်း ‘ကုလားထဲမှာ ဒီကုလားက အတော်ဆုံးပဲ’ လို့ ကနေ့ နံမယ်ကြီး အင်္ဂလိပ်စာ ကျူရှင်ဆရာတယောက်က ပြောဖူးပါတယ်။ ဒီစကားဟာလည်း ဘုရားကို ကြည်ညိုသူတွေကြားမှာ မသင့်တော်ပေမယ့် ရိုင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်မယူဆမိပါဘူး။ မှန်တာတွေတောင် ပါပါသေးတယ်။ အတော်ဆုံးဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး (ဟုတ်နိုင်ပါတယ်) ဘုရားကို ကုလားပြည်မှာ မွေးတာမို့ ကုလားလို့ ခေါ်တာကတော့ သမိုင်း အချက်အလက်အရ မမှားပါဘူး။
Posted by zizawa | 03/07/2010, 08:24 “ဘုရားကို ကိုယ့်ဆရာ လို့ ခေါ်တာ မသင့်တော်ပေမယ့် ရိုင်းတယ်လို့ ကျွန်တော် မယူဆပါ။” — ဟုတ်ကဲ့ မသင့်တော်ဘူးဆိုတာကို သိနေမှတော့ ဘာကြောင့် သုံးနေတယ်ဆိုတာကိုပါ နားမလည်တော့ပါဘူး။ မသင့်တော်တဲ့ အသုံးတွေကိုလဲ စာဖတ်သူတွေ လိုက်နာကျင့်သုံးစေချင်တဲ့ သဘောလားဆိုတာကိုပါ နားမလည်တာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မသင့်တော်တဲ့ အသုံးအနှုံးကို မသင့်တော်မှန်းသိတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။ 😉
Posted by MayThandar | 03/07/2010, 16:05 ကျနော်ဆိုလိုချင်တာကလည်း Zizawa ပြောသလိုပါခင်ဗျ။ သာမဏ အကြောင်း ဒီ ပို့စ်ပေါ်မှာပဲ ကျနော် သိသလောက် ရေးထားတာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ကွန်မန့်တွေက ဘာသာရေးဘက် ပိုရောက်သွားတော့ စိတ်ဝင်စားလက်စနဲ့ Jainism အကြောင်း နည်းနည်း ဆက်ပြောချင်ပါတယ်။ Jain အကြောင်းပြောရတာက ဒီနေ့ထက်ထိ ရှင်သန်နေသေးတဲ့ Sramana ဘာသာတစ်ခု ဖြစ်နေလို့ပါ။ သူတို့ တွေမှာရှိတဲ့ အခြေခံ တရားတွေထဲမှာ ငါးပါးသီလ(Five Major Vows)တို့၊ ရတနာသုံးပါး(Three gems of Jainism)တို့ ပါပါတယ်။ ငါးပါးသီလကို ကံသုံးပါးနဲ့ တွဲထားတာလည်းတူတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ထပ်တူတော့ မဟုတ်ပါ။ သေချာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် အတော်စိတ်ဝင်စားစရာ အတွေးတွေရပါတယ်။ အဘိဓမ္မာနဲ့ ပတ်သက်တာလေးတွေလည်း Wiki ထဲက အမြည်း ကူးချပေးပါမယ်။
The concept of Karma in Jainism is basicallyareaction due to the attachment or aversion with which an activity (both positive and negative) is executed in thought, verbal and physical sense. When one act without attachment and aversion there will be no further karmic bonding to the soul.
Wiki ထဲမှာရေးထားတာတော့ Jain ဘာသာဟာ Indian ဘာသာရေးတွေထဲမှာ အတွေးအခေါ် အတော်လွတ်လပ်ဆိုပဲ။ တခြားဘာသာ ဘုရားကျောင်းတွေမှာ ဂေါပကတောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူတို့မှာလည်း ရဟန်းမ (ဒီလိုပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်) ရှိတယ်။ တဆက်တည်း မြန်မာပြည်က သီလရှင် တစ်ပါး သီရိလင်္ကာမှာ ဘိက္ခုဏီပြုဖို့ ကြိုးစားတာ မြန်မာ မဟာသံဃနာယက အဖွဲ့က တရားဝင်အရေးယူတာ ကြားလိုက်မိတယ်။
Posted by WinSg | 02/07/2010, 17:28 Reply to this comment	koaung နဲ့ အလှတရား တို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်များကို သဘောကျမိပါတယ်… အဲလိုတုံ့ ပြန်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်..။ ကိုဝတုတ် တင်တဲ့ ပို့စ်တွေကို အတွေးအခေါ် ဆန်းသစ်လို့ အမြဲလို ဖတ်နေပေမဲ့ .. တခါတလေမှာ မလိုအပ်ဘဲ ဖောက်ထွက်တွေးခြင်းဟာ.. အများအတွက် အကျိုးမရှိစေဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်။
Posted by ခဂ္ဂါ | 01/07/2010, 07:29 Reply to this comment	ဒီ post ကတော့ မလိုအပ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးတယ်လို့ မထင်မိပါဘူး။ ဒါလည်း ကိုယ့်အမြင်သက်သက်ကို ပြောတာပါ။
Posted by Rita | 01/07/2010, 13:31 Reply to this comment	ပို့စ်ရေးသားသူရော… အချို့သော ကွန်မင့်လုပ်သူများဟာ လိင်ခွဲခြားမှုရဲ့ သာဓကအနေနဲ့ ဘုရားပေါ် အမျိုးသမီးတက်ခွင့်မရှိတာကို ဥပမာပေးတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော်စဉ်းစားကြည့်မိပါတယ်။ ဘယ်ကျမ်းဂန် ဘယ်စာအုပ်မှ မှီငြမ်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ တွေးမိတာကို ပြောကြည့်မလို့ပါ။ သဘောတူချင်မှ တူပါ။
ဒီတော့ အခုလို Hygenen product တွေ ခေတ်မစားသေးတဲ့ ရှေးတုန်းက ဘုရားရင်ပြင်တော်တွေ၊ ဘုရားပစ္စယံတွေမှာ မိန်းမတွေ ရာသီလာရင် စွန်းထင်းသွားမှာ စိုးရိမ်ကြလို့ မိန်းမမတက်ရတို့၊ မိန်းမ မကပ်ရတို့ ဆိုတာတွေကို မိန်းမတွေရော၊ ယောက်ျားတွေပါ သဘောတူပြဌာန်းခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲသည်ခေတ်က မိန်းမတွေကိုယ်တိုင်က သူတို့ကိုးကွယ်ရာ၊ အထွဋ်အမြတ်ထားရာ နေရာကို သူတို့ကြောင့် စွန်းထင်းမသွားစေချင်လို့ သူတို့စိတ်နဲ့ သူတို့ မသွားကြဘို့ အချင်းချင်း တားမြစ်ကြတာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ လိင်ခွဲခြားချင်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့တာ ဟုတ်ပုံမရပါဘူး။ (ကျနော့် မှန်းဆချက်ပါ)။ နောက်ပိုင်း နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါ လူတွေက အကြောင်းရင်းကို မစဉ်းစားတော့ဘဲ “ဘုရားပေါ်ကို မိန်းမတွေ တက်ခွင့်မပြုဘူးတဲ့။ မိန်းမတွေကို နှိမ်တယ်” ဆိုတာမျိုး ပြောလာကြတာလို့ ယူဆရပါတယ်။
Posted by ကိုပေါ | 01/07/2010, 08:05 Reply to this comment	Correction: hygiene products
Posted by ကိုပေါ | 01/07/2010, 09:15 Reply to this comment	တိုးတက်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ ပညာရေး, စီးပွားရေး, လူမှုရေးစသဖြင့် အဖက်ဖက်မှာ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေနဲ့ တန်းတူအခွင့်အလမ်း ရှိသင့်တယ်။ ရှိအောင်လည်း အားထုတ်သင့်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ သို့သော် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ သဘာဝတွေအရ အခွင့်အလမ်း မတူညီမှုတွေကတော့ ရှိနေမှာပဲ။ (ဥပမာ လုံခြုံရေးတာဝန်မျိုးမှာ အမျိုးအများစုနဲ့ မသင့်တော်သလို၊ ကလေးထိန်းအလုပ်မျိုးမှာလည်း အမျိုးသားတွေနဲ့ မသင့်တော်သလိုမျိုး)
Posted by ဧရာ | 01/07/2010, 14:45 Reply to this comment	I absolutely agree with you Ko Ayar. Your replies are always measured and fair. Thank you, sir..
Posted by zizawa | 01/07/2010, 16:10 Reply to this comment	ကိုဝတုတ်ရေ၊
Posted by မန်းကိုကို | 01/07/2010, 16:53 Reply to this comment	ဟုတ်ကဲ့။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် Wikipedia မှာ လိုက်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ တခြား စွယ်စုံကျမ်းသုံးလည်း ရတာပါပဲ။ Buddhism, Jainism နဲ့ Sramana ဆိုပြီးရှာကြည့်ပါ။ ကျွန်တော် ဆယ်တန်းအောင်စက BC မှာ Indian religions ဆိုတဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ စဖတ်ခဲ့တာပါ။ စိတ်ဝင်စားလို့ နောက်ပိုင်း Wikipedia မှာ မကြာမကြာ ဆက်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Jainism ဆိုရင် အတော် ဖတ်ဖြစ်နေသေးတယ်။ Hinduism နဲ့ Sramana ကူးလူးဆက်နွယ်မှုကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ နောက်တစ်ခုပါ။ အယူတွေ ဆန့်ကျင်နေပေမယ့် အပြန်အလှန် အကျိုးပြုမှု ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုပြောနေကြတဲ့ Gender ကိစ္စ အပါအဝင်ပေါ့။ မဟာယနဖက်တော့ သိပ်မဖတ်နိုင်သေးပါ။ ကျနော့အတွက်တော့ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ မျက်စေ့ အများကြီး ပွင့်သွားစေခဲ့တယ် ထင်ပါတယ်။ တချို့ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပုတ်ခတ်နေတယ်လို့ ထင်ချင်ထင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဘာလည်းဆိုတာတော့ လေ့လာသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။
Posted by WinSg | 01/07/2010, 18:28 Reply to this comment	I just stopped thinking how to answer this.
Posted by Aung Aung Oo | 02/07/2010, 02:14 Reply to this comment	I just stopped thinking about how to answer this.
Posted by Aung Aung Oo | 02/07/2010, 02:15 Reply to this comment	“-ဗုဒ္ဓဘာသာလို့သာပြောရတယ် တကယ်တော့ကိုးကွယ်မူဘာသာမဟုတ်ပါဘူး။
ုko aung ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်ကို ဖတ်ရတာ တကယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။😉
Posted by Truth | 02/07/2010, 09:39 Reply to this comment	ကိုယ့်ဆရာလို့သုံးလိုက်တာမှာ ဗုဒ္ဓကို လူသားစစ်စစ် အနေနဲ့ပြလိုက်သလို ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ကို အတွေးအခေါ်အမြော်အမြင်ကြီးတဲ့ ဖလော်ဆော်ဖာ လူသားတယောက်အနေနဲ့ လက်ခံထားတဲ့လူမျိုးအတွက် ကောင်းကောင်းလက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း သူ့ရဲ့ လမ်းစဉ်တွေ၊ သူ့ရဲ့ ဝါဒ နဲ့ ဖလော်ဆော်ဖီကို တွေးကြည့် မြင်ကြည့်တဲ့ အခါ အကုန်လုံးမှန်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ခေါင်းထဲမှာမထားပဲ မှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်လို့ တောင်ယူစလို့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော့အမြင်သက်သက်ပါ။ စာရေးသူ အနေနဲ့ စော်ကားချင်တဲ့ သဘောပါလိမ့်မယ်လို့ မထင်ပါ။
Posted by မျိုးဇေယျာဦး | 03/07/2010, 13:25 Reply to this comment	ဟုတ်ကဲ့။ ဗုဒ္ဓ လူသားစစ်စစ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတင်သာမက တကမ္ဘာလုံးက လူသားတိုင်း သိကြပါတယ်။ မသင့်တော်ဘူးဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးလိုက်မှ ဗုဒ္ဓ လူသားဖြစ်တယ်ဆိုတာထက် သုံးလိုက်တဲ့ လူရဲ့ အတွေးခေါ်ကို အယူအဆတွေကို ထိခိုက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ နောက်တချက်က ဗုဒ္ဓရဲ့ စကား တရားတွေကို တွေးကြည့်ရုံနဲ့တော့ အမှန် တိတိကျကျ ထွက်လာမည် မထင်ပါ။ ဗုဒ္ဓ ကိုယ်တော်တိုင်ပြောကြား(ဟောကြား) ခဲ့တာပဲ။ ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံအားထုတ်ကြည့်ပါတဲ့။ ko aung ဆွေးနွေးသလို လ်ိမ္မော်သီးကို အခွံရော အသားရောစားနိုင်အောင် ကြိုးစားပြီးမှ သေချာ ဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်။ စာဖတ်ဖူးရုံ တွေးကြည့်ရုံနဲ့တော့ ကိုယ်အားသန်တဲ့ အယူအဆတွေပဲ ထွက်လာဖို့များတယ် ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျေးဇူးပါ။😉
Posted by MayThandar | 03/07/2010, 16:13 Reply to this comment	“Believe nothing, no matter where you read it, or who said it, no matter if I have said it, unless it agrees with your own reason and your own common sense.”
Buddha Buddhism is one of the very few religions in history that strongly encourage and practice reason. Withoutafree mind and liberal reasoning, there will be no Buddhism because Buddha himself thought free and never avoided debates with other religions or persons. And there were many evidences that he also accepted some well reasoned requests including ဘိက္ခူဏီ in this post.
Posted by WinSg | 04/07/2010, 20:51 “Buddha himself thought free and never avoided debates with other religions or persons.” — Sure! That’s why, it is called Buddha and Buddhism.
Debate လုပ်တာတော့ လုပ်ပေါ့။ လုပ်တဲ့ အခါမှာ သေချာလေ့လာပြီးမှ လုပ်တာက ပိုကောင်းတာပေါ့။ အထင်အမြင်နဲ့ debate လုပ်နေလို့ကတော့ ဗုဒ္ဓနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Negative Thinking ရှိနေတဲ့သူက အဖြေတမျိုး, Positive Thinker က တမျိုး ဖြစ်နေရင် အကျိုးမရှိ အချိန်ကုန်တာပဲ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒီတော့ debate မလုပ်ခင် The objective of Buddhism ကို သေချာလေ့လာပြီး နဲနဲလောက် apply လုပ်ကြည့်ပြီးမှ debate လုပ်တာ ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်လေ။ Theory တခုကို သက်သေပြမယ်ဆိုရင်တောင် အနည်းဆုံးတော့ apply လုပ်ပြရသေးတာပဲ။ အားလုံးသိပြီးသားပါ။ အထင်နဲ့ ဖတ်ဖူးရုံနဲ့ Debate လုပ်နေလို့ကတော့ မည်သည့်အခါမျှ အဖြေမှန်ထွက်လာမည်မထင်ပါ။ စာတွေ့မဟုတ်ဘဲ နဲနဲလောက် apply လုပ်ကြည့်ပါဦး။ စာတွေပဲဖတ်ပြနေ ရေးပြနေရုံနဲ့ ဘာသာတခုကို ယုံကြည်အောင် စွဲဆောင်တဲ့ အဆင့်ကနေတက်မည် မထင်ပါ။🙂
Posted by MayThandar | 05/07/2010, 02:49 Reply to this comment	ဒီကိစ္စဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ တရားကိုယ်နဲ့ ကျင့်စဉ်တွေကို စိစစ် ဆွေးနွေးနေခြင်း အထိ မရောက်ပါဘူး။ ဂိုဏ်းဂဏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို context တစ်ခုပေါ်တင်ကြည့်နေခြင်းသာ ဖြစ်တယ်လို့ ရိုးရိုးသားသား ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းဝင်ပါတာပါ။ တရားကိုယ် အနှစ်အသားတွေအထိ ရောက်လာခဲ့ရင် ဝင်မပါချင်ပါ။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ဆွေးနွေးရာမှာ Apply လုပ်ကြည့်စရာမလိုဘူးလို့ ထင်တယ်။ ကိုယ်စီးမယ့်ကား ဘီးပေါက်နေသလား သိချင်တာကို မောင်းကြည့်စရာ မလိုသလိုပေါ့။ အင်ဂျင်ပါဝါတို့ အချိုးအကွေ့တို့ကို သိချင်ရင်တော့ မောင်းကြည့်ရပါမယ်။ ကျနော်ပြောချင်တာကို သဘောပေါက်မယ် ထင်ပါတယ်။
Posted by WinSg | 05/07/2010, 07:11 ဟုတ်ကဲ့။ ပြောချင်တာကို သဘောပေါက်ပါတယ်။
အဓိက က ဂိုဏ်းတွေအကြောင်း လေ့လာနေတာဆိုရင်လည်း ဆက်ပြီးလေ့လာကြပါ။ ဆွေးနွေးကြပါ။ နောက်ဆုံး ဂိုဏ်းတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးပြီး ရလာမည့် အဖြေဟာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာနဲ့ ဗုဒ္ဓစကားအတိုင်း လိုက်နာနေသူတွေအတွက် ဘာတွေ အကျိုးရှိလာမလဲ, ဘယ်လို အကျိုးရှိမဲ့ အဖြေမျိုးတွေ ထွက်လာမလဲ ဆိုတာကို ဆက်ပြီးဖတ်ပါမည်။ ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။😉
Posted by MayThandar | 05/07/2010, 08:48 မိန်းမက မိန်းမဖြစ်လိုခွဲခြားခံကတာ..ကိုသောက်ကြီးသောက်ကြယ်…ယျဥင်္ကျေးသလို
Posted by peterlay | 30/06/2011, 10:30 Reply to this comment	ဟာ…..ခုမှ ဒီဘလော့ကို ဖတ်ဖူးတာ၊ ဘာသာရေး ဆွေးနွေးပွဲဆိုပီး စိတ်ဝင်စားလို့ ၀င်ကြည့်လိုက်တာ ဒီထဲက မိန်းမ များကို ယောက်ျားများနဲ့ ဘုရားရှင်က တန်းတူမထားခဲ့တဲ့ ကိစ်စကို တော်တော်ငြင်းခုန်နေကြတာပဲ ၊ ဘလော့ကို အစုန်အဆန် လှန်ကြည့်လိုက်တော့ လား လား…. သူတလူ ငါတမင်း ပါလား… အရှင်ဥာဏိသရ လဲ အကောင်းမနေရဘူး….. အပြုသဘော ငြင်းခုန်ကြတာတော့ ကောင်းတယ်ဗျိူ့ ။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ်စက ငြင်းနေဖို့မလိုဘူး.။။တည်တော ဆရာတော် အမေးအဖြေ မှာ ဘာကြောင့် ဗုဒက ဒီလိုခွဲခြားထားသလဲ ဆိုတာကို ကျမ်းကိုးနဲ့ ရှင်းထားတယ်။ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းကလဲ အခု အထက်က ပုဂိုလ်များ ငြင်းခုန် နေကြသလို အပေါ်ယံမှုတ်ဘူးနော် ဆရာတော်ကို အားမနာ ပါးမနာကို မေးတာ။ ဒီမေးခွန်း -အဖြေ စုံတွဲကို အခု ဒီမှာတင်ပေးချင်ပေမယ့် အများကြီးမို့ စာမရိုက်နိုင်ဘူးဗျာ။ အဲ ဒီဟာနဲ့တင် ဘ၀င်မကျသူတွေ ရှိချင်ရှိမယ်။ ရှိရင် သမိုင်းကို ပါ ထပ်ပေါင်း။ သမိုင်းဆိုတာ မိန်းမတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်သမိုင်း၊ ဘုန်းတန်ခိုးသမိုင်း စတာတွေကို ပြောတာ၊ အရှည်ကြီးဗျာ.. ဥပမာ တခုလောက်စဉ်းစာ။ ကဘာ့သမိုင်းမှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ ဘုရင် အယောက် ၅၀ မှာ မိန်းမ အနဲဆုံးတစ်ယောက် ပါသလား။ ဒါဥပမာ တစ်ခု။ အဲ… အဲလို ဘာကြောင့်မပါတာတုံး။ ဘယ်သူက မပါပါနဲ့ လို့ ကန့်သတ်ခဲ့သတုံး။ လူ့သမိုင်းကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ သိပ်ပံပညာရှင် နာမည်တွေ တပုံတပင်ရှိရဲ့။ မိန်းမ နာမည် လက်ချိူးရေလို့ ရပါတယ်။ မိန်းမတွေ သိပ်ပံသုတေ သန မလုပ်ရဘူးလို့ ဘယ်သူ ကန့်သတ်တုံး။ ဒီကိစ်စ ကျနော်ရှင်းမယ် ။ အခု စာမရိုက်နိုင်လို့ မပီးရင် နောက်နေ့ ဆက်ရှင်းမယ်။ မပူနဲ့။ သံသယ ကင်းသွားစေရမယ်။ အဲ ကျနော် ရှင်းမယ်ဆိုတာ မိန်းမတွေကို ချိူးဖို့ မှုတ်ဘူး … ဘာကြောင့် ဆိုတာ ရှင်းမှာ။ အဲ ခုနက ဟာ ပြန်ဆက်ရအောင်။ ဒီကိစ်အကြောင်းပြောရင် ကျနော်တို့ ဘာဝ ဆိုတဲ့ အဓိပါယ် ပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်ရင် တစ်လုံးထဲ ပီးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီက ပုဂိုလ်တွေက အဲထက်ပိုတဲ့ ရှင်းလင်းချက် လိုချင်လိမ့်မယ်။ ဆရာတော်ကတော့ ဘာဝဆိုတာနဲ့ရှင်းသွားတယ်။ နောက်တချက်။ ဘုန်းတန်ခိုးဆိုတာလဲ ဒီမှာ အကျူံးဝင်လိမ့်မယ်။ သမိုင်းတစ်လျှောက် ဘုန်းတန်ခိုးကြီးခဲ့တဲ့ မိန်းမ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိခဲ့သလဲ ဆိုတာမျိူးပေါ့ အဲ ဟုတ်ပီ အဲဒါတွေ အားလုံး ဖြစ်မလာခဲ့တဲ့ မူရင်း ဇာစ်မြစ် ကလဲ ဘာဝ ပဲ။ ဆရာတော်ကို မေးထားတဲ့ အမေးကိုကြည့် ။ မိန်းမများ ကြိုးစားရင် ဒီဘ၀မှာတင် အာသဝေါ တောင် ကုန်နိုင်လျှက်သားနဲ့ ဘာကြောင့် မဟာဗြဟာ မဖြစ်နိုင်ရတာတုံးဆိုတဲ့ မေးခွန်းပဲ ။ သာမန် ဗြဟာတော့ ဖြစ်နိုင်တယ် ဒါပေါမယ့် မဟာ ဗြဟာတော့ မဖြစ်ဘူး ။ ဘာကြောင့်တုံး မြတ်စွာဘုရားကများ ဟေ့ နင်တို့ … အာသဝေါ ကုန်ချင်ကုန်မယ် .အဲဒီနေရာတော့ နင်တို့နဲ့ မတန်ဘူး လို့ မသွားရလို့ သတ်မှတ်ခဲ့သလား.. ဒါမှမဟုတ် ရှေးရှေး ဘုရားရှင်တွေက ဒီလို ခွဲခြားခဲ့လို့ သူက အစဉ်အလာအရ ခွဲခြားခဲ့တာလား……… ဒီမှာ ဆရာတော်က အင်္ဂုတရ ဧကနိပါ တပါဠိ ၂၉၊ အဌာနပါဠိ ဒုတိယ၀ဂ်ကို ကိုးကားပီးဖြေတယ် … ဘုရားက ဒီလိုဟောတယ်၊ လောကမှာ မဖြစ်ကောင်းတဲ့ ကိစ်စတွေ ရှိတယ်။
၇၊ ဒုစရိုက် ၃ ပါးဟာ ကောင်းကျိူးကို ပေးန်ုင်တဲ့ အကြောင်းမရှိဘူး။ ဟုတ်ပီ ။ အာသဝေါတောင် ကုန်အောင်စွမ်းဆောင်လို့ရတယ်၊ မဟာဗြဟာဘုံဆိုတာက ပထမဈာဉ် ၃ ဘုံထဲက အမြင့်ဆုံးဘုံကို ပြောတာ။ အဲလောက်လေးကို ဘာကြောင့်မရနိုင်တာတုံး။ သူ့အထက် က သုဒါ ၀ါသဘုံ( အနာဂါမ်များ( ကျားမ အနာဂါမ်မရွေး) ရောက်သောဘုံ) တောင်ရောက်နိုင်တယ်ဗျာ။ မဟာဗြဟာဘုံကို ဘာကြောင့် မရောက်နိုင်ရတာတုံး။ ဒီမှာ ဆရာတော်က ရှင်းတယ် ။ မိန်မများဟာ ဈာဉ်ရအောင် တော့ အားထုတ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အာနုဘော်ထက်မြက်အောင်တော့ မထုတ်နိုင်ဘူး။ ထက်မြက်အောင် မဆိုထားနဲ့ အလယ်အလတ်အဆင့် အာနုဘော်ထက်မြက်အောင်တောင် မထုတ် နိုင်ဘူးတဲ့။ why?
ဘယ်ဘုရားရှင်မှလဲ အားမထုတ်နိုင်အောင် မကန့်သတ်ခဲ့ဘူး။ ဘုရားက သူ့ဓမတာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ကိုပဲ ခင်ဗျားတို့သိအောင်ဟောခဲ့တာ။ ဆိုလိုတာက describe ပဲ လုပ်ခဲ့တယ်ဗျာ intervene မလုပ်ခဲ့ဘူး လုပ်လို့လဲ မရဘူး။ ဓမတာမို့ပဲ။ အဲ အထက်က ကတ်သီးကတ်သတ် အကြီးအကျယ်စဉ်းစားတတ်တဲ့ ပုဂိုလ်များက(ဥပမာ-ဗုဒ္ဓစာပေရယ်လို့ ကျန်ခဲ့တဲ့အထဲက ဘလောက်က သူဟောတာအစစ်အမှန်ပါပီး ဘလောက်က ကုလားနဲ့သီဟိုဠ်ဘုန်းကြီးတွေထပ်ဖြည့်ထားတာဆိုတာ မသိနိုင်တော့ပါဘူး ဆိုတဲ့ ပုဂိုလ်မျိူးပေါ့) ဓမတာဆို တာ ဘာတုံးလို့ ထပ်အတွန့်တက်အုံးမယ်ဆိုရင် ဓမတာဆိုတာ မိုးရာသီမှာ မိုးရွာတာမျိူး နွေရာသီမှာ ပူတာမျိုး ဆောင်းရာသီမှာ ချမ်းတာမျိူးကို ပြောတာပါ။
ကျိူက်ထီးရိုးကိစ်စ က ဒါနဲ့ မဆိုင်ဘူး ဒါက သမိုင်းနဲ့ ရှင်းရမယ့်ကိစ်စ ပဲ။ အယူသီးမှုတွေနဲ့ ဆိုင်တယ်။ အဲ.. အယူသီးတယ်ဆိုတာတောင် ကိုယ်တွေ့ ကို အခြေခံပီး အယူသီးတာတွေ ရှိသေးတယ် ရမ်းပီး စွတ်စွဲလို့တော့ မရဘူး။ အယူသီးတယ်လို့ ထင်ရင် အခု မြန်မာမင်း အဆက်ဆက် ဘယ်ဘုရင်ကများ အမိန့်တော်နဲ့ ကျိူက်ထီးရိုးဘရား မိန်းမများ ကိုယ်တိုင် ရွှေချလို့ရပါပြီလို့ ချမှတ်ရဲခဲ့သလဲ။ ဘုရင်တိုင်းဘုရင်တိုင်း ပညာရှင် အမတ်တွေနဲ့ နေခဲ့ကြတာပဲ။ ကျနော် ဒိထက်မက ပိုရေးချင်တယ်။ ပိုရှင်းသွားအောင်လို့။ အရှင်ဥာဏိသရ မလိုဘူး။
အဲ… မိန်းမများ ဒို့ကတော့ မိန်းမပဲ ပိုနိမ့်ကျတယ် လို့ အလကား သိမ်ငယ်နေစရာတော့ မလိုဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိန်းမ ဘာဝရဲ့ အားသာချက်များစွာထဲက တခု ကျနော် ပြောပြမယ်။ ဂင်္ဂါ ၀ါလု သဲစုအမျှ ပွင့်သွားကြတဲ့ ဘုရားရှင်များ ဘယ်ဘုရားရှင်မှ ယောက်ျား ဗိုက်ထဲက ထွက်လာပီး ဘုရားဖြစ်မသွားကြဘူး။ မိန်းမ ဗိုက်ထဲက ပဲထွက်ကြရတယ်။ ဒါကြောင့် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင် ဆိုတာ မိန်းမ မရှိ့ပဲ ရှိကို မရှိနိုင်ဘူး။ ကျေးဇူးပဲ။ ဒီထဲက ထပ်မေးစရာရှိရင် kzybyk@gmail.com ကို မေးလို့ရပါတယ်။
Posted by kzybyk | 07/11/2011, 13:03 Reply to this comment	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...